Famaliana kabary ataon’ny Mpamoaka - Informations et Actualités sur Madagascar
Culture Education Famaliana kabary ataon’ny Mpamoaka
by Alpha world on 22 h 25 in Culture, Education
Tsy sanatria aminay ny hanao toy ny ranon’Ikopa ka tonga namana vao mavomavo, fa faly izahay miarahaba anareo ato an-tokatranonay. Ianareo no andrasana tompoko, efa eto avokoa ireo solontenan’ny fianakaviana izay atrehi-mahefa, iambohoava mahavita. Afaka miroso amin’ny resaka sy ny dinika isika tompoko.
Mialoha izany anefa, ao ilay tenin’ny soratra masina manao hoe
“Raha tsy Jehovah no manao ny trano, dia miasa foana ny mpanao azy, raha tsy Jehovah no miambina ny tanàna, dia miaritory foana ireo mpiambina”.Raha tsy izy no nitantana sy nivimbina antsika, nahafahana nihaona toy izao dia tsy tanteraka izany. Koa rariny sy hitsiny raha hisaotra azy isika mialoha ny dinika sy ny resaka.
By Alpha world at 22 h 25